Nutritious Items (0)
CoolFancyShop (www.Coolfancyshop.com) သည် StudioAMK Co.,Ltd. ၏ product တစ်ခုဖြစ်ပြီး StudioAMK Co.,Ltd. မှလွှင့်တင်ထားသော website ဖြစ်ပါသည်။
CoolFancyShop၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ customer များအတွက်လိုအပ်သော Fashion, Electronics, အိမ်အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားသော အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများကို အချိန်မကုန်ပဲ တနေရာထဲတွင် အဆင်ပြေစွာ ၀ယ်ယူနိုင်ရန် online မှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး အမျိုးအစားစုံလင်သော products များနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ကျေနပ်အားရဖွယ်ကောင်းသော ၀န်ဆောင်မှုတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ online shop တစ်ခု အဖြစ် စတင်ခဲ့သည်မှာ.. အချိန်2နှစ်ထဲသို့ပင် ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။
CoolFancyShop တွင်ရောင်းချလျက်ရှိသော Branded ပစ္စည်းများမှာလည်း အစစ်ဖြစ်ကြောင်း customer များအတွက် အာမခံချက်အပြည့်အဝ ပေးပါတယ်ရှင်။
ထို့အပြင် CoolFancyShop website ပေါ်တွင် လာရောက်ရောင်းချလိုသော Merchants များအတွက်လည်း စိတ်ကျေနပ်စွာ ရောင်းဝယ်နိုင်ရန်အတွက် ကြားခံနယ်အဖြစ် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်ရှင်။
CFS တွင် products များ တင်သွင်းလိုသော Merchants များအတွက် ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ကာဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပြီး မိမိတို့ရောင်းချလိုသော stock များထားပေးရုံမှ အပ customers နှင့် ဆက်ဆံရေး၊ ၀န်ဆောင်မှု ၊ delivery၊ payment တွေအတွက် ကို စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ customers များ၏ လက်ဝယ်သို့ stocks များ လျှင်မြန်ချောမွေ့စွာ ရောက်ရှိစေရန် CFS က စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိအောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။
CoolFancyShop သည် merchant များနှင့် customer များကြားအဆင်ပြေစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးသော ကြားခံ mediator ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ merchant များရောင်းချလိုသော ပစ္စည်းများကိုရောင်းချပေးပြီး လိုအပ်သော service charge တခုကို နှုတ်ကာကျန်သော လက်ကျန်ငွေကို merchant များကိုပြန်လည်ပေးအပ်ပါမည်။
CoolFancyShop သည် CB ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သော online shopping website ဖြစ်သောကြောင့် ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စများတွင်လည်း စိတ်ပူပန်စရာမလိုဘဲနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ၀ယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။
CoolFancyShop သည် အလုပ်တစ်ဖက်နှင့် shopping ထွက်ရန် အဆင်မပြေသူတွေ၊ online shopping သက်သက် ထွက်ချင်သော customers များအတွက် တစ်နေရာထဲတွင် အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင် နှင့် အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းများကို ရရှိစေရန်နှင့် Onlineshopping ၏ အနှစ်သာရများကို တစ်နေရာထဲတွင် ခံစားရရှိနိုင်စေရန် အတွက် ဖန်တီးထားသော Online shop တစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်ပြီး ကျေနပ်လောက်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးတဲ့ CoolFancyShop တွင် အားပေးကြပါစို့နော်. <3<3<3
264, 1C, Seik Kan Thar St, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.
Tel : 01 388206, 011221461
Merchant Support : [email protected]
Member Register နှင့် Login
ရောင်းသူ Register လုပ်ရန်
CoolFancyShop ©2012. Powered by Studio AMK Co., Ltd.